हलेसी र छिरिङको बच्चा
काठमाडौंबाट हलेसी महादेव दर्शन गर्न जाँदै गरेको एउटा जीप उदयपुरको घुर्मी बजारबाट सुनकोसी नदीमाथिको फेरी तर्न जाने ओरालो लाग्दै छ। हिलो र खाल्डाखुल्डीले बिग्रेको सडकमा गाडीको गति सुस्त छ। त्यहीबेला बीच सडकमा देखा परेको एक स्थानीय मान्छे गाडी रोक्न संकेत गर्दै भन्छ, 'बाटो बिग्रेको छ, गाडी जाँदैन। रोक्नूस्।'
चालकसहित गाडीमा भएका सबै पाँचजना ओर्लिन्छन् र बाटो हेर्न थाल्छन्। नभन्दै बीच बाटोमा ठूलो पहिरो गएको देखिन्छ, सानो गाडी पनि पास नहुनेगरी। यत्तिकैमा एक हुल मान्छे आएर भन्छन्, 'गाडी जानेगरी यो बाटो हामी बनाइदिन्छौ, छ हजार रुपैयाँ दिनूस्।'
कहाँदेखि मन्दिर जान भनेर आएका मान्छे, बल्लतल्ल तीन हजार पाँच सयमा कुरा मिलेपछि बाटो मर्मतमा करिब १० जनाको हुल जुट्यो। गाडीमा आएकाहरू वरिपरि थकाइ मार्ने ठाउँ पनि नहुँदा चर्काे गर्मीमा उनीहरूले चाङ लगाउँदै गरेका ढुंगा हेर्न थाल्छन्।
करिब १० मिनेटपछि अर्काे गाडी पनि हलेसी जानको लागि आएर त्यहीँ रोकिन्छ। गाडीबाट चालकसहित एक पुरुष र चार तिब्बती मूलका महिला ओर्लिएर सोध्छन्, 'के भएको हो?'
अघिल्लो गाडीमा आएकामध्ये एउटा अधबंैसे जवाफ दिन्छ, 'गाडी जाने बाटो छैन, तपाईंहरू कहाँ जान लाग्नुभएको?'
'हामी हलेसी जान लागेको,' त्यसमध्येकी एउटी गोरी राम्री महिलाले भनिन्।
'त्यसोभए पैसा बाँडीचुँडी उनीहरूलाई दिऔं, बाटो बन्छ अनि सँगै जाऔंला,' उसले भन्यो र उनले मानिन्।
उनीहरूसँग आएको पुरुष पनि अब बाटो मर्मतमा जुट्न थाल्यो। हेर्दा पूरै तिब्बती देखिने त्यो मान्छे अरूसँग हिन्दी भाषामा कुरा गरिरहेको थियो। आपसमा भने उनीहरू तिब्बती भाषामा कुरा गरिरहेका हुन्थे।
झन्डै एक घन्टाको समयमा दुईवटा गाडीका ११ जनाबीचमा राम्रै कुराकानी हुन थालिसकेको थियो। तर भाषिक समस्याले गर्दा बेला–बेला कुराकानी रोकिन्थ्यो।
जब कुराकानी व्यक्तिगत हुन थाल्यो, तब अधबैंैसेले ती राम्री गोरी माहिलालाई सोध्यो, 'तपाईंहरू कहाँबाट आउनुभएको?'
उनले कनीकुथी नेपालीमा भनिन्, 'खास मेरो घर क्यानाडा हो। उहाँ मेरो श्रीमान् हुनुहुन्छ र उहाँहरू मेरा दिदीबहिनी। मेरो बाल्यकालको घर सिन्धुपाल्चोक। १५ वर्ष भयो क्यानाडा गएको, उतै बिहे गरेको। ऊचाहिँ भारतीय हो। दिदी–बहिनीहरूको घरचाहिँ बौद्धमा छ।'
उनी क्यानाडाकी बासिन्दा भएको र नेपाली बोल्न गाह्रो भएको देखेर अधबैैंसेले सजिलो पार्न अंग्रेजीमा बोल्न सुरु गर्योो। त्यसपछि उनी र उनका श्रीमान् झन् खुल्दै गए।
बाँकी सबैजना एक अर्कासँग कुरा गर्दै जानकारी लिइरहेका थिए। बाटो बनेपछि दुवै गाडी ओरालो लागे।
सुनकोसी नदीमा पुल छैन। फेरीबाट गाडी र मानिस तर्ने क्रममा अर्काे एक घन्टा ती दुई समूहबीच कुरा भयो। जहाँ उनीहरू दुई रातको लागि हलेसी जान लागेको भन्दै थिए भने पहिलाको समूह एकरातको लागि। हलेसी गुफालाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा महायाना सम्प्रदायका मानिसले मान्ने र त्यहाँ गएर मागेको जुनसुकै वर पनि पूरा हुने विश्वास रहेको कुरा उनीहरूले बताए, जुन कुरा पहिलो समूहलाई त्यति थाहा थिएन।
संयोगले झमक्क साँझ पर्दा हलेसी पुगेका दुवै समूहका तीर्थालु बस्ने होटेल एउटै परेछ। आकाशमा कालो बादल मडारिइरहेको थियो। ठूलो पानी पर्यो भने सुनकोसीमा फेरी नचल्ने अनि त्यो बिग्रेको बाटोको भोलिको अवस्था सम्झेर होला उनीहरूले पनि पहिलो समूहसँग भोलि नै काठमाडौं फर्कने सल्लाह गरेछन्।
भोलिपल्ट गुफामा भेट्दा उनीहरूले 'हामीहरू सँगै काठमाडौं जाऔं है' भन्दा पो थाहा भयो उनीहरूको विचार।
गुफा दर्शन गरेर फर्कंदा झमझम पानी परिरहेको थियो। बाटो कस्तो होला भन्ने चिन्ताले सबैको अनुहार ग्रसित देखिन्थ्यो। तर क्यानाडाबाट आएकी छिरिङ नामकी राम्री महिला भने साह्रै खुसी देखिन्थिन्। अधबैंसेले चियाको सुर्कोसँगै जिस्काउँदै भन्यो, 'छिरिङ त साह्रै खुसी देखिनुहुन्छ नि, के भो त्यस्तो? गुरु रिम्पोछेले के भन्नु भो?'
अधबैंसैले ठट्टामा गरेको प्रश्नले उनको मन यसरी छोएछ कि उनी बसेको मेचबाट जुरुक्क उठिन्। एकदमै प्रफुल्ल भएर भन्न थलिन्, 'हो म आज एकदम खुसी छु। मेरो बिहे भएको आठ वर्ष भो, बच्चा भा'को छैन। क्यानाडामा जति उपचार गर्दा नि भएन। सबैले हलेसीमा गएर माग्नु भनेकोले म र मेरो श्रीमान् यहाँ आ'को।' हलेसी गुफाभित्र रहेको बच्चा माग्ने द्वारबारे विश्वासका साथ बोल्दै उनी भन्दै थिइन् र सबै एकटकले उनको कुरा सुन्दै।
'आज बिहान मैले र मेरो श्रीमान्ले बालकद्वारमा गएर बच्चा मागेर आयौं, अब हाम्रो बच्चा हुन्छ।' सबैले उनको आस्थामा हाँमा हाँ मिलाए, तर सबैको अनुहारमा ठूलो प्रश्नवाचक चिह्न थियो, के क्यानाडाजस्तो विकसित देशको आधुनिक उपचार विधिले गर्न नसकेको काम हलेसी गुफाको कुनामा रहेको सानो ढुंगाको ककारो मात्रको आराधनाले पूरा गर्ला त? तर कसैले यो प्रश्न उनलाई गर्ने हिम्मत गरेनन्। बरु सबैले चाँडै नै उनको इच्छा पूरा होस् भनी शुभकामना दिए।
हिजो भेटेदेखि यति बेलासम्म दुई समूहको कुराकानीले उनीहरूले एक अर्कालाई नजिकबाट चिनिसकेका मात्र नभई उपहारसमेत आदानप्रदान गरिसकेका थिए। अझ त्यसमाथि पनि छिरिङ र अधबैंसे भने कलेज पढ्दादेखिका पुराना साथीजस्तै भएर फरर अंग्रेजीमा कुरा गर्दै थिए।
हलेसीबाट बिदावारी भएर आफ्नो गाडीमा फर्कंदै गर्दा घुर्मीको सुनकोसी आइपुग्दा ११ बजिसकेको थियो। कर्मचारीहरूलाई खानाका लागि करिब डेढ घन्टाको लागि फेरी बन्द भएछ। हिजोदेखिका थकित साथीहरू यताउता लागे भने अधबैंसे र छिरिङ कलकल बगेको सुनकोसीको किनारको ठूलो ढुंगामा बसेर कुरा गर्न थाले। करिब २४ घन्टाको चिनाजानीमा छिरिङ अधबंैसेको कुरा गर्ने शैली र उसका हरेक विषयमा भएका ज्ञानको प्रशंसक बनिसकेकी थिइन् भने अधबैंसेचाहिँ उनको हाउभाउ, बोलिचाली र विश्वासको। छिरिङका श्रीमान् यताउता फोटो खिच्न थाले भने दिदीबहिनीहरू बालुवा खेल्दै रमाउन। अधबैंसेका साथीहरू चिया पिउन ओखलढुंगाको हर्कपुर बजारतर्फ लागे।
वरिपरि कोही नभएको मौका छोपी छिरिङ भन्दै गइन् र अधबैंसे सुन्दै, 'काठमाडौंबाट हलेसी आएर दर्शन गरी फर्कंदा हेलिकोप्टरमा कति पैसा लाग्छ होला? जब अर्को साल मेरो बच्चा जन्मन्छ, बच्चा एक वर्षको भएपछि उसलाई हलेसी गुफा दर्शन गराउन लिएर आउँछु क्यानाडाबाट।' उनी कल्पनालोकमा यसरी डुबिन् कि, अधबैंसेले एकटकले हेर्दै उनको त्यो मुद्राको फोटो खिचेको पनि पत्तो पाइनन्। अधबैंसेले करिब सात हजार क्यानेडियन डलर लाग्नेबारे बताउँदा उनले भनिन्, 'द्याट्स नट मच्, आई क्यान इजिली स्पेन्ड द्याट् अमाउन्ट फर माई चाइल्ड।'
सुनकोसीमा फेरीबाट गाडी तारियो। फेरि दुवै समूह मिलेर पाँच हजार खर्च गरेर बाटो बनाए। किनकि गाडी उता गएपछि हिजो बाटो बनाउनेले भोलिको लागि पैसा कमाउन बाटो बिगारिसकेका रहेछन्। बाटो बिगार्नु र बनाउनु उनीहरूको व्यवसाय रहेछ। बाटो बन्दै गर्दा घुर्मी बजारमा सँगै बसेर दुवै समूहले खाना खाए र विभिन्न विषयमा गफ गरे तर अधबैंसेको मन भने हलेसीको बालकद्वार, छिरिङको अनुहार र उसको भविष्यको बच्चाको कल्पनाबाट बाहिर आउन सकेको थिएन। उसले आज थाहा पायो, मान्छेको विश्वास संसारमा सबैभन्दा ठूलो छ जसलाई संसारको कुनै शस्त्र–अस्त्रले हराउन सक्दैन, नत्र एउटा जोडी क्यानाडाबाट हलेसीको गुफामा बच्चा माग्न आउने मात्र होइन, अब पक्कै बच्चा जन्मन्छ भन्ने विश्वासका साथ पछि बच्चा लिएर आउन हेलिकोप्टरको बारेमा समेत कल्पना गर्न थालिसक्यो।
नेपाल, भारत र संसारका अनेकौ भूभागको भ्रमण अनि असंख्य मठ–मन्दिरमा पूजाअर्चना गरिसकेको अधबैंसे अब सोच्न बाध्य छ, उसले कहिल्यै कुनै पनि मन्दिरमा भगवानसँग केही किन मागेन? र, उसले अझै अर्को कुनै मन्दिरमा जाँदा के माग्ने होला भनेर सोच्न पनि सकेको छैन।
आफ्नो पूरा परिचय अनि फेसबुक र इमेल ठेगाना दिँदै अधबैंसेले भन्यो, 'तपाईंको बच्चा भएपछि खुसीको खबर मलाई पक्कै भन्नु होला है।'
ढाडको नशा च्यापिएर काठमाडौंमा शल्यक्रिया गरेपछि हिँड्न नसकेका लेखफाँट, पर्वतका गिरिबहादुर पुन म्याग्दीको सिंगा तातोपानी कुण्डमा ११ दिन डुबुल्की मारेर गाउँ फर्केका छन्।बोकिएर कुण्ड पसेका उनी चौंथो दिनदेखि नै बच्चाले...
बस्नलायक सहर धरान
तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरले १९५८ सालमा चन्द्रपुर बजार (हालको पुरानो बजार) बसालेर धरान सहरको जग हालेका थिए। इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई काठ आपूर्ति गर्न धरान हालेर चारकोसे जंगल फँडानी गरिएकाले...
जाऔं है स्वरेक
झम्के साँझ । चिसो मौसम । स्याङजाको स्वरेक गाँउ (१६००मिटर) । पञ्चेबाजा र लोकगीतको धुन । सबै मस्त । जति थाके पनि गाउन र नाच्नमा साइकले पनि कम थिएनन् ।...
सहयोगमा लुकेका स्वार्थ
दाता वा विदेशी सहयोगको प्रसंग बाल्यकालमा मामाप्रतिको अपेक्षासँग नजिक देख्छु। जस्तो– बच्चाहरु मामाका बारेमा अनेक गीत र कल्पना बनाउँछन्। मामाप्रति उनीहरुको प्रेम देख्दा यस्तो लाग्छ, आफ्नै बाबुआमाको भन्दा पनि उनीहरुलाई...
मकर संक्रान्ति । बहुसंख्यक नेपालीले मनाउने चाड । घिउ, चाक्कु, तरुल,तिलको लड्डु, मासको बाह्रा खाने । मिन पचासको ठण्डि भगाउने । शुक्रबार र शनिबार दुई दिन बिदा । सबेरै ६ः१५...